ဒူဒူကြီး: Oil Fired Drum Type Water Tube Boiler Steam Quality
Oil Fired Drum Type Water Tube Boiler Steam Quality
Main Propulsion System ကို၊ Internal Combustion Engine တွေတတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့၊ Motor Ship လို့ခေါါတဲ့၊ သဘေ်ာတွေမှာ Exhaust gas heat exchangers မှတဆင့်၊ steam ကိုထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Internal Combustion Engine ဖြစ်တဲ့ Main Engine လည်ပတ်မောင်းနှင်ရာမှ၊ ထွက်ပေါါလာတဲ့ Exhaust Gases တွေကို၊ Exhaust gas heat exchanger ထဲမှဖြတ်သန်းစေပြီး၊ Steam ကိုထုတ်ယူတာမို့ Exhaust gas boiler လို့လည်းခေါါကြပါတယ်။
Fig. Generator engine exhaust gas economizer
Generator engine capacity ကြီးမားတဲ့၊ သဘေ်ာတွေမှာ၊ Main engine မှ Exhaust gas ကိုသာမက၊ Generator မှ၊ Exhaust Gases တွေကိုပါအသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Exhaust gas heat exchanger/ Exhaust gas boiler/ Economizer
Main Engine လည်ပတ်မောင်းနှင်ချိန်မှာ၊ Auxiliary Boiler ဖြစ်တဲ့ Oil fired boiler ကို၊ အသုံးမပြုပဲ Exhaust gas heat exchanger မှတဆင့်၊ steam ထုတ်ယူတဲ့အခါ လောင်စာကိုချွေတာနိုင်တာမို့ Economizer လို့လည်းခေါါကြပါတယ်။
Economizer လို့ခေါါကြတဲ့၊ Exhaust gas boiler သို့မဟုတ် Exhaust gas heat exchanger ဟာ၊ သာမန် heat exchanger တွေလိုပဲ၊ Tube banks တွေတတ်ဆင်ထားပြီး၊ Feed water ရေ ကိုဖြတ်သန်းစေပါတယ်။ Tube တွေရဲ့အပြင်ဖက်မှာ၊ Hot exhaust gas တွေဖြတ်သန်းပြီး၊ ရေ ကို Steam အဖြစ်ပြောင်းလဲရယူပါ တယ်။
Steam ကိုထုတ်ယူတဲ့အခါ၊ Moisture ရေခိုးရေငွေ့တွေပါဝင်နေသေးတဲ့ Wet steam အနေနဲ့သာ ထုတ်ယူ နိုင်ပြီး၊ ရေခိုးရေငွေ့ကင်းစင်တဲ့ Dry steam ရစေဖို့၊ Super heater ကိုဖြတ်သန်းဖို့လိုပါတယ်။ Economizer ရဲ့ Super heater ဟာလည်း၊ Exhaust gas ကိုအသုံးပြုပြီး၊ Dry steam ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။
Feed pump မှ၊ Boiler drum အတွင်းကို ရေဖြည့်သွင်းပေးပြီး၊ Feed water line မှာ Pre-heater ကိုတတ် ဆင်ထားပါတယ်။ Steam ကိုလက်ခံဖို့နဲ့ Separation process တို့ကို၊ Boiler မှဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် Boiler ကို Steam receiver အနေနဲ့ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သဘေ်ာဟာ ပင်လယ်ပြင် မှာခုတ်မောင်းသွားလာစဉ် Auxiliary Boiler ဖြစ်တဲ့ Oil fire boiler ကိုရပ်ထားပြီး၊ Exhaust gas boilers မှတဆင့် Steam ကိုထုတ်ယူပါတယ်။
Fig. Submerged steam coil in cargo tank
သဘေ်ာတွေမှာ Steam ကိုယေဘုယျအားဖြင့် အပူပေးဖို့အသုံးပြုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စက်မောင်းဆီ Fuel တွေကို၊ အပူပေးပြီးအသုံးပြုရတဲ့အတွက်၊ Fuel Tank တွေအတွင်းရှိ၊ Heating coil တွေအတွင်းကို၊ Steam ပေးပို့ရပါတယ်။ Product Tankers နဲ့ Crude oil carrier ဆိုတဲ့၊ သဘေ်ာတွေ မှာတော့ တင်ဆောင် တဲ့ Cargo အမျိုးအစားအလိုက် အပူပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ Cargo tank တွေ အတွင်းမှ Heating coil တွေအတွင်းကို၊ Steam ပေးပို့ပြီးအပူပေးပါတယ်။
အပူပေးတဲ့ အခါ၊ Submerged steam coils ဆိုတဲ့ Tank တွေရဲ့အောက်ခြေမှာ Steam coil တွေကို တတ်ဆင်အပူပေးတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့၊ Steam jackets ဆိုတဲ့ နံရံမှာ Steam line တွေတတ်ဆင်အပူပေးတဲ့ နည်းလမ်းဆိုပြီး (၂) မျိုးရှိပါတယ်။
Crude oil, Edible oils, Tallow နဲ့ Molasses အစရှိတဲ့ Cargo တွေဟာ၊ Ambient temperatures မှာစေး ပျစ်နေပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် Viscosity မြင့်မားပါတယ်။ Steam နဲ့အပူပေးကာ၊ Viscosity ကျဆင်းသွား မှ၊ Cargo pump တွေနဲ့ Discharge လုပ်လို့ရပါတယ်။ တတ်ဆင်မယ့် Steam coil ရဲ့ အရွယ်အစား ကိုရွေးချယ်ဖို့၊ Heat transfer area ကို
ဆိုတဲ့၊ ပုံသေနည်းနဲ့၊ တွက်ယူပါတယ်။ Heat transfer area ကိုတွက်ယူတဲ့အခါ U ဆိုတဲ့ Heat transfer coefficient တန်ဘိုး၊ တနည်းအားဖြင့် Steam coil တွေမှရမယ့်၊ Heat emission rate ကိုမှန်ကန်စွာရွေး ချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
Fig. Heat emission rate for steam coils submerged in water
Fig. Heat emission rate for steam coils submerged miscellaneous liquids
Fig. Nominal surface areas of steel pipes per meter length
Fig. Valve pressure drop
တကယ်တော့ Steam ကိုInitial supply စလွှတ်တဲ့အခါ၊ Control valve မှ CPD - Critical pressure drop ကြောင့် Upstream absolute pressure ရဲ့ (58 %) ကိုသာ Steam coil တွေမှာလက်ခံရရှိပါတယ်။
Fig. Steam coils inarectangular tank
Steam coil တွေကို၊ Steam manifold နဲ့ Condensate manifold တို့ကြားမှာ၊ အလျှားလိုက်အပြိုင်နေရာ ချထားလေ့ရှိပါတယ်။ Steam ဟာ အပူပေးစဉ် heat loss ကြောင့် condensate ဖြစ်သွားတာမို့၊ Condensate manifold ကို အနိမ့်ပိုင်းမှာတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ Condensate ကို Steam trap သို့မဟုတ် Pump trap သို့အလွယ်တကူစီးဆင်းစေဖို့၊ Drain line ကို Condensate manifold ရဲ့အောက်ခြေ bottom မှာထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ ထပ်မံဝင်ရောက်လာတဲ့ Steam flow ဟာ၊ Condensate တွေကို coil ထဲမှတွန်းထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Tank အတွင်း Steam coil design နဲ့ Layout နေရာချထားမှုဟာ၊ အပူပေးမယ့် Process fluid အမျိုး အစားပေါါမူတည်ပြီးကွဲပြားပါတယ်။ Corrosive solution အမျိုးအစား Process fluid တွေဟာ Steam coil connection တွေရဲ့ Lining နဲ့ Packing တွေကိုစားသွားနိုင်တဲ့အတွက်၊ Coil In let နဲ့ Out let connection တွေကို၊ Tank အပြင်မှာပဲတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ Lead covered steel, Copper နဲ့ Titanium alloy လို၊ Corrosion resistant material Steam coil တွေကိုအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
Steam coil တွေကို Tank အတွင်း၊ Inlet မှ out let အထိ၊ တဖြည်းဖြည်းခြင်းနှိမ့်ကာ၊ တတ်ဆင်ထားတာမို့၊ condensate ဟာ tank bottom မှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Steam In let နဲ့ Out let connection ဟာ Tank အပြင်မှာ တနည်းအားဖြင့် main deck လို၊ Tank ထက် အမြင့်မှာရှိနေတဲ့အတွက်၊ condensate တွေကို၊ Tank အပြင်မှ Steam traps တွေကတဆင့် Drain လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီအခါ rising discharge pipe လို Arrangement တွေကိုသုံးပြီး၊ condensate ကိုဖယ်ထုတ်ယူပါတယ်။
Fig. Rising discharge pipe arrangement
Rising discharge arrangement မှာ Seal နဲ့ Small bore dip pipe တို့ကိုတတ်ဆင်အသုံးပြုပါတယ်။ Seal arrangement ဟာ condensate အနည်းငယ်ကိုစုယူပြီး၊ water seal အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးသလို၊ steam locking ဖြစ်ပေါါမှုကိုလည်းတားဆီးပေးပါတယ်။ water seal မရှိခဲ့ရင်၊ steam ဟာ pipe bottom မှ condensate တွေကိုသယ်ယူသွားပြီး၊ riser မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ steam trap ကိုပိတ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ condensate level မြင့်တက်လာတဲ့အခါ၊ temporary water seal ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ riser ရဲ့အောက်ခြေ နဲ့ steam trap တို့ကြားမှာ၊ locked steam အနေနဲ့ထိမ်းထားပါတယ်။ locked steam ဟာ condenses ဖြစ်လာတဲ့အခါ၊ steam trap ဟာပွင့်သွားပြီး၊ water slug ကို riser မှတဆင့်အပေါါကို တွန်းပို့ကာ discharge လုပ်ပ်ပါတယ်။
water seal မရှိတော့တာနဲ့ steam ဟာ ပြန်လည်ဝင်လာပြီး၊ riser မှတဆင့်အပေါါကိုတက်ကာ၊ steam trap ကိုပြန်ပိတ်စေပါတယ်။ dip pipe ရဲ့ bore တနည်းအားဖြင့် အချင်း ဟာသေးငယ်တဲ့အတွက်၊ steam ပမာဏအနည်းငယ်သာဝင်ရောက်ပြီး၊ riser ကို locked steam အနေနဲ့အပေါါအထိတက်ကာ ပိတ်ပေးပါ တယ်။ Rising discharge process ဖြစ်ပေါါမှုဟာ steam coil အတွင်း steam အဆက်မပြတ်စီးဆင်းနေစဉ် ဖြစ်ပေါါတဲ့အတွက်အလွန်လျှင်မြန်ပါတယ်။ သဘေ်ာ Main deck ပေါါမှာလမ်းလျှောက်သွားနေစဉ်၊ Steam trap မှ၊ condense steam တွေထွက်လာ တဲ့အခါမှ၊ water seal မှတဆင့် discharge လုပ်လိုက်တာကို သိနိုင်ပါတယ်။
Inert gas plant တွေရဲ့ Deck seal unit မှ၊ Wet type deck seal အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့အခြေခံအားဖြင့် တူတာ ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Wet type deck seal မှာ sealing water ကို permanently ဖြည့်ထားတာဖြစ်ပြီး၊ Inert gas တွေကို sealing water အတွင်းဖြစ်သန်းစေပြီးမှ၊ ရောပါလာတဲ့ ရေကို demister pad နဲ့စစ်ယူ တာဖြစ်ပါတယ်။ Rising discharge arrangement မှာတော့၊ water seal ဟာ temporary seal ဖြစ်ပြီး၊ locked steam အနေနဲ့ တွန်းပို့လုပ်တဲ့ condensate ကို steam trap မှ discharge လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Side hung coils arrangement
တချို့ product တွေဟာ deposit တွေပါဝင်ပြီး၊ Tank အောက်ခြေမှာ အနယ်ထိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ deposit တွေများလာတဲ့အခါ Tank bottom မှ Steam coil တွေကိုဖုံးအုပ်လာပြီး၊ Heat transfer ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ Deposit ဖြစ်ပေါါနိုင်တဲ့ Product တွေကိုအပူပေးတဲ့အခါ Tank ဘေးနံရံတွေမှတဆင့်
အပူပေးတဲ့ Side hung coil arrangement တွေကိုတတ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
Fig. Jacketed vessel arrangement
တခါတရံမှာ အပူပေးမယ့် vessel တခုလုံးကို Steam coil တွေနဲ့ အပြင်မှ၊ ဖုံးအုပ်အပူပေးတဲ့ Arrangement မျိုးကိုလည်းအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၊ Jacketed vessel arrangement လို့ခေါါပါတယ်။ Heat losses မဖြစ်ပေါါစေဖို့ Steam Jacket တွေအပေါါမှ၊ ထပ်မံဖုံးအုပ်ထားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Heat emission rate for Jacket vessel
Steam coil တွေဟာ Submerged steam coils arrangements နဲ့ Jacket vessel arrangement တို့မှာ Heat emission rate တနည်းအားဖြင့် Overall heat transfer coefficient တို့မတူတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သဘေ်ာတွေရဲ့ Tank တွေအတွင်းမှ Product cargo တွေကိုအပူပေးတဲ့အခါ၊ Heating surface area ကြီး မားတဲ့အတွက်၊ Submerged steam coils arrangements နဲ့ Side hung arrangements တွေကိုသာ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
အသုံးပြုတဲ့ Steam ဟာ Correct quantity လုံလောက်တဲ့ပမာဏရှိခြင်း၊ Temperature နဲ့ Pressure မှန်ကန်ခြင်း၊ Air လေ နဲ့ In-condensatable gases အငွေ့မပျံနိုင်တဲ့ဓါတ်ငွေ့တွေပါဝင်မှုမရှိခြင်း နဲ့ Dry and Clean ဆိုတဲ့ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းခြင်း စတဲ့အချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Correct quantity လုံလောက်တဲ့ Steam ပမာဏရှိပြီး၊ Temperature နဲ့ Pressure မှန်ကန်မှသာ Sufficient heat flow ကို ရရှိပြီး၊ Heat transfer လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
System ကို start-up လုပ်စဉ်၊ steam pipes တွေနဲ့ equipment တွေအတွင်းကို၊ Air လေ နဲ့ In-condemnable gases တွေဝင်ရောက်တတ်ပါတယ်။ System ထဲမှာ Pure steam အပြည့်ဖြည့်ပြီး၊ shutdown လုပ်ထားပေမယ့် Condense အငွေ့ပျံပြီး၊ Resultant vacuum ကြောင့်ပြင်ပလေ နဲ့ gases တွေ ကို ဆွဲသွင်းတတ်ပါတယ်။ Steam ရောနေတဲ့အခါ၊ လေ နဲ့ gases တွေဟာ heat transfer surface မှာရှိနေ မှာဖြစ်ပြီး၊ insulation သို့မဟုတ် heat transfer barrier အနေနဲ့ အပူကူးပြောင်းမှုစွမ်းရည်ကိုကျစေပါ တယ်။
System အတွင်း Steam ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ၊ လေ နဲ့ gases တွေကို Drain point တွေသို့ တွန်းထုတ် မှာဖြစ်ပြီး၊ Remote point လို့ခေါါတဲ့ Steam in let နဲ့ အဝေးဆုံး Drain point အထိတွန်းထုတ်နိုင် တာတွေ့ ရပါတယ်။ ပြင်ပလေ နဲ့ gases တွေအလွယ်တကူထွက်နိုင်ဖို့ Steam traps တွေရဲ့ Air venting capacity ကောင်းမွန်ဖို့လိုသလို၊ Remote points တွေမှာလည်း Automatic air vents တွေတတ်ဆင်ထား
Steam trap အမျိုးအစားတွေကို Primary categories အနေနဲ့၊ Mechanical, Thermostatic နဲ့ Thermodynamic trap ဆိုပြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ Steam traps တွေကတော့၊ Inverted bucket steam trap, Float steam trap, Thermostatic steam trap နဲ့ thermodynamic disc steam trap တို့ဖြစ်ပြီး၊ Application ပေါါမူတည်ပြီး၊ ရွေးချယ်တတ်ဆင်ရပါတယ်။
Fig. Steam Trap application guide
Fig. Float thermostatic steam trap
Fig. Traditional thermo-dynamic steam trap
Application အနေနဲ့ Canteen equipment, Oil transfer & Storage, Hospital equipment, Industrial dryer, Laundry equipment, Presses, Process equipment, Space heating equipment, Steam mains နဲ့ Tanks and vats ဆိုပြီး၊ အုပ်စုတွေခွဲခြားထားတဲ့အထဲက၊ သဘေ်ာတွေမှာ၊ Oil transfer & Storage, Steam mains နဲ့ Tanks and vats တို့အတွက်၊ ရွေးချယ်တတ်ဆင်သင့်တဲ့ Steam trap တွေ ကို၊ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လေဟာ Boiler feed water ထဲမှာလည်းပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။ Boiler make-up water နဲ့ Condensate တို့ဟာ Feed tank မှ Exposed atmosphere အနေနဲ့ ပေးသွင်းတာဖြစ်လို့၊ Nitrogen, Oxygen နဲ့ Carbon dioxide တို့ပျော်ဝင်နေပါတယ်။ Boiler feed water ကို အပူပေးတဲ့အခါ၊ Gas တွေအနေနဲ့ Steam မှာရော ပါသွားပြီး၊ System အတွင်းဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်။
Atmospheric air မှာ Nitrogen (78 %), Oxygen (21 %) နဲ့ Carbon dioxide (0.03 %) ပါဝင်ပါ တယ်။ Solubility လို့ခေါါတဲ့ ရေမှာပျော်ဝင်နိုင်မှုမှာ Oxygen ဟာ Nitrogen ထက် (၂) ဆခန့်ပိုပြီး၊ Carbon dioxide ကတော့ Oxygen ထက် အဆ (၃၀) ခန့်ပိုပါတယ်။ Boiler feed water မှာ Oxygen နဲ့ Carbon dioxide တို့ပိုမိုပျော်ဝင်နေပြီး၊ Boiler နဲ့ Piping ဆိုတဲ့ Steam system ကို Corrosion ဖြစ်စေ ပါတယ်။ Feed tank မှာ Temperature 80°C အောက်ကို မကျအောင် ထိမ်းထားမှသာ၊ Oxygen နဲ့ Carbon dioxide တွေဟာ၊ Atmosphere ထဲကိုထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Steam pipe တွေရဲ့ အတွင်းနံရံတွေမှာ၊ Carbonate deposit တွေနဲ့ Rust တွေဟာ၊ Scale အလွှာအနေနဲ့ ဖြစ်ပေါါနေတတ်ပါတယ်။ Scale ဟာ Heat transfer barrier အနေနဲ့ အပူကူးပြောင်းမှုကိုကျဆင်းစေပါ တယ်။ Water treatment မှားယွင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ Boiler water droplets impurities တွေ ကြောင့် လည်းပေါါပေါက်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Piping initially installed စတင်တတ်စဉ်စဉ်က၊ Welding slag တွေနဲ့ Excess jointing material တွေဟာ၊ System ထဲမှာကျန်နေခဲ့ပြီး၊ Dirt တွေအနေနဲ့ ရှိနေတတ် ပါတယ်။ Scale နဲ့ Rust fragments တွေဟာ၊ Pipe bend အကွေးနေရာတွေမှာ Erosion rate ကို မြင့်မားစေသလို၊ Steam traps တွေနဲ့ Valves တွေရဲ့ Orifices တွေကိုလည်း၊ ပိတ်ဆို့စေတတ်ပါတယ်။
Fragments တွေကို၊ Pipeline strainer တတ်ဆင်ပြီးဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ Strainer တွေကို Steam trap, Flow-meter, Pressure reducing valve နဲ့ Control valve တွေရဲ့ Upstream မှာ တတ်ဆင်ရ ပါတယ်။ Condensate ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းမဖြစ်စေဖို့နဲ့ Water-hammer မဖြစ်ပေါါစေဖို့၊ Strainers ကို Steam lines sides ဘေးတိုက်အနေအထားနဲ့ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဘေးတိုက်တတ်ဆင်တဲ့အခါ Strainer screen area နဲ့ Steam flow အများဆုံးထိတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Steam ဟာ Piping system မှာ Heat losses ဖြစ်ရာမှ၊ Condense အငွေ့ပျံပြီ၊ Condensate ငွေ့ရည်ဖွဲ့ ကာ၊ Piping system wall မှာ Droplets တွေအဖြစ်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ Steam flow မှတွန်းလိုက်တဲ့ အ တွက် Droplets တွေဟာ၊ Film အလွှာပါးလေးအနေနဲ့ဖွဲ့တည်လာပြီး၊ Pipe အောက်ခြေမှာစုနေပါတယ်။ Film ဟာ အလွှာပါးအဆင့်ကနေ၊ အခြား Droplets တွေနဲ့စုမိရာက၊ Water slug အနေနဲ့ ဖွဲ့တည်လာပါ တယ်။ Water slug ဟာ 25 - 30 m/ s Steam velocity အလျှင်နဲ့ အတူ Piping system ထဲမှာရွှေ့လျား ပါတယ်။
Fig. water slug
Water slug တွေဟာ Dense ထူထပ်သိပ်သည်းပြီး၊ Incompressible ဆိုတဲ့ ဖိပ်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုး ဖွဲ့စည်းနေတာဖြစ်ပြီး၊ Steam ရဲ့တွန်းအားကြောင့် High velocity မြင့်မားတဲ့အလျှင်နဲ့ရွှေ့လျှားရာမှ၊ Kinetic energy ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ ရွှေ့လျှားလာတဲ့ water slug တွေဟာ၊ Piping system ရဲ့ Bend အကွေးနေရာတွေနဲ့ T joint နေရာတွေကိုရောက်တဲ့အခါ၊ Obstruction အတားအဆီး အနေနဲ့ ကြုံတွေ့ရ ပါတယ်။ အဲဒီအခါ Kinetic energy မှ Pressure energy အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး၊ Pressure shock ကို ဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ Water slug တွေကြောင့် Obstruction အတားအဆီးနေရာတွေမှာပေါါပေါက်တဲ့ Pressure shock ဟာ၊ Noise နဲ့ Vibration ကိုပါဖြစ်ပေါါစေပြီး၊ Water-hammer လို့ခေါါကြပါတယ်။
Fig. Potential sources of water-hammer
Water hammer ဟာ Steam piping system နဲ့ Fitting တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်စေတဲ့အပြင်၊ အခန့် မသင့်ပါက Explosive effect နဲ့ အတူ Hazardous situation ဘေးအန္တရာယ်ရှိစေတတ်ပါတယ်။ Condensate တွေကို Steam piping system ရဲ့ Low point အနိမ့်နေရာတွေမှ၊ ဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Water slugs တွေကိုလည်း၊ valves နဲ့ pipe fittings တွေရဲ့ downstream အထွက်နေရာတွေမှ တဆင့်၊ ဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
Feed water treatment လုပ်တဲ့အခါ၊ Incorrect chemical တွေကိုအသုံးပြုမိရာကတဆင့်၊ boiler feed water မှာ chemical တွေနဲ့ အခြားသော materials တွေပါဝင်သွားပြီး၊ heat transfer surfaces တွေမှာ deposits တွေအနေနဲ့ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ deposits တွေများလာပြီး၊ Plant efficiency ကိုကျဆင်းစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Boiler ကိုမီးထိုးတဲ့အခါ၊ Tubes တွေအတွင်း deposits တွေ ရှိနေတာမို့၊ Heat looses တွေကိုဖြစ်ပေါါစေသလို၊ Dry steam အနေနဲ့လည်းမရရှိနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Fig. Steam separator
Deposits တွေကြောင့် Steam ဟာ၊ Moisture droplets တွေနဲ့ Wet စိုစွတ်နေတတ်ပါတယ်။ Wet steam အနေနဲ့ရရှိလာတဲ့ Steam ကို Baffles plate တွေခံထားတဲ့ Steam separator မှာဖြတ်သန်းစေပြီး၊ Moisture droplets တွေနဲ့ လေအပါအဝင် In-condensable gas တွေကိုဖယ်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
သဘေ်ာတွေမှာ Cargo Heating အနေနဲ့ အသုံးပြုမယ့် Steam ရဲ့ Quality ဟာ၊ ကောင်းမွန်ဖို့လိုအပ် ပါတယ်။ Steam မှာ၊ Air လေ နဲ့ In-condensatable gases တွေရောနှောပါဝင်နေပြီး၊ ခြောက်သွေ့ သန့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အခါ၊ Temperature နဲ့ Pressure မှားယွင်းမှုတွေပေါါပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dalton's Law of Partial Pressures အရ၊ အမှန်တကယ်ရရှိမယ့် Effected Steam Pressure ကိုတွက်ယူခြင်းကို၊ ဥပမာအနေနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Fig. Dalton's Law of Partial Pressures
Dalton's Law of Partial Pressures မှာ Thermodynamic relationship အနေနဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်တဲ့ အတွက်၊ Pressure ကို၊ "bar a" အနေနဲ့ ဖော်ပြပါတယ်။ Steam နဲ့ လေ ရောနေတဲ့အခါ၊ Temperature ကိုကျစေပါတယ်။ လေနဲ့ Gases တွေရဲ့ Pressure ဟာ၊ Steam pressure နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး၊ Total pressure အနေနဲ့ ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ Steam/ air mixture total pressure ဟာ4baraအနေနဲ့ဖော်ပြနေပြီး၊ Steam volume ¾ နဲ့ လေ ¼ ရှိခဲ့ရင်၊ Dalton's Law of Partial Pressures အရ ¾ X4bara=3baraဆိုပြီး တွက်ယူတဲ့ အခါ၊ Steam ရဲ့ Effected pressure ဟာ3baraသာရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအခါ Steam tables အရ၊ ရှိရမယ့် saturation temperature ဟာ 144°C မှာမရှိပဲ၊ 134°C မှာသာရှိတာကို၊ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါ တယ်။
Fig. SI unit Steam Tables
Saturation temperature ကို အတိအကျမရတဲ့အခါ၊ အပူပေးရမယ့် Cargo တနည်းအားဖြင့် Product ရဲ့ Chemical and Physical changes ဓါတ်ဂုဏ်သတ္တိနဲ့ ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိပြောင်းလဲမှုတွေအနည်းနဲ့အများ ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 18:40